China Nyowani yekugadzira isina mvura yekugadzira lipstick seti Kugadzira uye Fekitori |Yuteng
Cosmetic bhokisi kudhinda.Yakanaka kurongedza yerunako mhinduro
Simudza ruzivo rwevatengi vako rwekuzora uye runako zvakakosha nemabhokisi ekuzora anodhinda.Mabhokisi akadhindwa ecosmetic anomiririra mhando yako pamhepo uye pasina indaneti.
Makiyi eMabhokisi-Akagadzirwa Nehunyanzvi Zvekuzodzwa Mabhokisi
Sarudzo yako yezvishandiso ndiyo inosarudza kuti chigadzirwa chinoratidzwa sei.
Single-layer cardstock inouya mune matatu machira anokuita kuti udzore kutaridzika kwese kwedhizaini yako.Kudzika kwemavara pabhokisi rako rekuchengetedza makeup kwakakosha, kunyanya nezvigadzirwa zvinosimbisa mumvuri we lipstick kana eyeshadow palettes.Unogona kusarudza kubva 14 pt., 18 pt., kana 24 pt.cardstock.
Corrugated cardboard gobvu uye inoshingirira kubatwa kwakashata.Inokurudzirwa kune zvigadzirwa zvichatumirwa kuburikidza netsamba.Ichi chinyorwa chinouya mune yakasarudzika chena kana rustic Kraft (brown) ruvara.
Gadzirisa mutsara wako unotevera wemabhokisi ekugadzira zvinoenderana nehukuru hwakakodzera.Odha yako inogona kugadzirwa kubva kune anotevera mitsara:
Kureba: 0.75" - 30"
Kureba: 0.75" - 20"
Kudzika: 1.75" - 20"
Maitiro Ekugadzira Ane Impact Akadhindwa Cosmetic Mabhokisi
Heano mashoma matipi ekugadzira dhizaini inokwezva kumusika wako:
Simbisa mhando yako neyakajairwa font.Minimalist typography inobata kutarisisa kwevatengi vako uye inochengeta kutarisa kwavo.
Batanidza mavara ane chinangwa.Mavara anodziya anoshanda kuunganidzwa kwezhizha.Shandisa toni dzinotonhorera dzebhuruu negirinhi kune zvigadzirwa zvinoitirwa kuzorodza ganda, senge moisturizers kana sunblock.
Shandisa maitiro akasiyana kana mifananidzo yekugadzira.Dhizaina bhokisi rezvizoro vatengi vako vanozoda kuchengeta uye kushamisira online.Mapendero emaruva kana maumbirwo asingaoneki anoshanda zviri nyore pamuchena kana Kraft (brown) kumashure.
Zvese izvi zvinogona kuitwa uchishandisa yedu online dhizaini chishandiso.Iwe unogona kurodha mifananidzo, kuwedzera zvinyorwa, uye kusanganisa mavara mushure mekuratidza iwo madhizaini ako echinyakare cosmetic mabhokisi odha.
Miromo inopenya iri kushandiswa zvakanyanya mazuva ano.Girazi rine jira rinopenya rinopa pfungwa kumutengi wezvavari kutenga.Bhokisi rakachekwa rakagadzirwa zvakanaka rinogona kuita basa rakakosha muchisarudzo chekutengesa chemutengi.Mazhinji makambani ari kushandisa mapeji kuti aonekere pamusika.Sei usingafaniri?
Iwo plus maprinta USA ane akasiyana siyana etsika lip gloss mabhokisi aunogona kushandisa kuchengetedza chigadzirwa.Vashandi vedu vanokwanisa vachakubatsira pakusarudza akanakisa lip gloss mabhokisi echigadzirwa chako chakakosha.Isu tinopa vatengi vedu mabhokisi emhando yepamusoro sezvo mutengi wese akakosha kwatiri.Tiudze zvakatemwa uye uwane mabhokisi paunenge uchiisa odha yako.
Mabhokisi edu emhando yakasarudzika anogona kuita kuti chigadzirwa chako chitaridzike mumusika.Kana iwe wakakudziridza kufarira mune yedu lip gloss mabhokisi, unogona kutibata nesu kuburikidza nepeji redu uye kutumira zvese zvaunoda.
Zvakapfuura: pressure pot packaging box
Zvinotevera: soup poto bhokisi
Mabhokisi ehembe, Lid Uye Pazasi Bhokisi, Kraft Paper Bags, Customized Brown Kraft Pepa Mabhegi, Yakagadzirirwa Kraft Pepa Bag Ruva, Kraft Paper Bag,